မသိရှိမှုတွေကြောင့် ကျရှုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ | Mycanvas
လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အရာရာတိုင်းကို မသိမြင်နိုင်ပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ဘယ်တော့မှလဲ သိမြင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ယူစရာအသစ်တွေနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များဟာ အမြဲရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် မသိနားမလည်တဲ့နယ်ပယ်တွေရှိကြပြီး အဲဒါက လုံးဝကို OK ပါတယ်။ သို့သော် စိန်ခေါ်မှုနှင့်အခွင့်အရေးများကို မသိနားမလည်သော ခေါင်းဆောင်များသည် နောက်ဆုံးတွင် ကျရှုံးလိမ့်မည်ဟု မဆိုလိုပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာ မသိနားမလည်သော စိန်ခေါ်မှုတွေကို အမြဲကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်လုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရာက ကိုယ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာ သင်ယူပြီး မသိသေးတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ပါပဲ။
သင့်အနေနှင့် သတိထားသင့်တဲ့ နေရာလေးအချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်
သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာ သင်မသိဘဲဖြစ်နိုင်တဲ့ နယ်ပယ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက သင့်တိုးတက်မှုအတွက် အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို မကြာခဏတွေ့နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အပြုအမူများကို သင်မသိဘဲနေနိုင်သော်လည်း သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ စောင့်ကြည့်နေပြီး မှတ်သားနေပါသည်။ သင်ပြုမူပုံသည် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အပြုအမူအတွက် ဖော်ပြရာတွေ ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသလို သင့်အဖွဲ့သားများအတွက် စံပြအဖြစ် တည်ရှိနေပါတယ်။
အစည်းအဝေးတွေ အမြဲနောက်ကျနေသလား? အဖွဲ့သားတစ်ဦးအား ပေးဆောင်ရန် ကတိပြုပြီး ပျက်ကွက်ပါသလား? ကိုယ့်ရဲ့ညံ့ဖျင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် သင့်လုပ်ငန်းကိုသာ ထိခိုက်စေပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်မှုမှာ မသိနားမလည်မှုတွေ အများကြီးတွေ့နေရတဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အိပ်မက်တွေ၊ ဆန္ဒတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင်ပေါ့။ လာမယ့်နှစ်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုတိုးတက်စေချင်လဲ။ သင့်အဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်များကို မျက်ကွယ်ပြုရန် အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ထိုကြောင့် သင့်အဖွဲ့ကို သိရှိနားလည်ရန် ကြိုးစားပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အာရုံစိုက်သင့်တဲ့ နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကတော့ မိမိအဖွဲ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပါပဲ။ စွမ်းရည်ရပ်ဝန်းတွင် မိမိအဖွဲ့သားများသည် မည်သည့်နေရာတွင် ရပ်တည်နေသည်ကို သိရှိခြင်းက အနာဂတ်တွင် သင့်ပန်းတိုင်ရောက်ရန် သင့်အဖွဲ့ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ပုံကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ သင့်အဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်များကို မသိဘဲနေခြင်းသည် အခွင့်အလမ်းများကို လွဲချော်စေရုံသာမက နားလည်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် သင့်ရှိမှ အဖိုးတန်အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။